Software Developer နဲ့ Software Engineer ဘာကွာလဲ? — MYSTERY ZILLION
Software Developer နဲ့ Software Engineer ဘာကွာလဲ?
April 2012 edited April 2012 in Daily Life
ဒီ Fields နှစ်ခုရဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အပိုင်း၊ သင်ယူရတဲ့အပိုင်း ကွာခြားချက်လေးတွေကိုသိချင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ salary နဲ့ job level မှာလည်းဘယ်အပိုင်းကပိုမြင့်လဲ၊ SE တွေကိုဘယ်နေရာတွေမှာအလုပ်ခန့်လဲ၊
ဒီမှာရော SE အလုပ်တွေရှိလားဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်။
Oh! sorry ko saturngod. ကျွန်တော် post မတင်ခင်အရင်ရှာကြည့်သေးတယ်။ မတွေ့မိလို့.
Vanilla search is not good. try to search like
Software Engineer site:mysteryzillion.org
in google. Google is much better than original search
အင်း နိမ့်တယ်မြင်တယ်ဆိုတာ ရာထူးနာမည်နဲ့ခွဲလို့မရနိုင်ဘူး Programmer ဆိုတဲ့ရာထူးနာမည်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေပေမယ့် System Architect အလုပ်တွေ လုပ်နေရတာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို Software Engineer, Architect ဆိုပြီးတော့ နာမည်အကြီးကြီးနဲ့ ခန့်ထားပေမယ့်လည်း လုပ်စရာမရှိလို့ Data Entry သွင်းနေရတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ ဒါမျိုးတွေက ရေးပြီးသား အများကြီးရှိပါတယ် ရှာဖတ်ကြည့်ပါ မှတ်မိသ​လေက်တော့ လင့်တွေပြန်ရှာပေးထားတယ်။